Cabdishakuur Cali Mire oo ku guuleystay HOP#054 | Dayniile.com
Home Warkii Cabdishakuur Cali Mire oo ku guuleystay HOP#054
Cabdishakuur Cali Mire oo ku guuleystay HOP#054
Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta ka dhacday Doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP#54 oo ay ku tartameen 5 Musharax oo isu diiwaangelisay waxaa goobta ka maqnaa Hal musharax sida uu sheegay Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Galmudug.
Musharixiinta u tartantay kursiga HOP#054 ee hadal jeedinta qaatay ayaa kala ah:
Cabdishakuur Cali Mire.
Cabdullaahi Cali Cabdi.
Cabdirisaaq Cali Jaamac.
Cabdirisaaq Maxamed Cabdi.
Guddiga ayaa sheegay in habraaca lagu kala saarayo Musharixiinta uu yahay in qofkii hela 51 cod iyo ka badan uu si toos ah ugu guuleysanayo Kursiga, haddii dhammaan Musharixiintu ay helaan codad ka yar tiradaas wareegga labaad ay u gudbayaan labada musharax ee ugu codad badan.
Cabdishakuur Cali Mire oo Golaha Shacabka ku fadhiyay HOP#054 Baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya ayaa helay codad dhan (85), halka musharaxa labaad ee ku dhawaa codadka uu helay (5) waxaana halaabay (9) sida uu shaaciyay Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Galmudug oo ku dhawaaqay Natiijada.
Galmudug ayaa doorashada kursigaan ka dhigeysa in Xildhibaankii 5-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ah lagu doortay Magaalada Dhuusamareeb oo xarunta Dowlad-Goboleedkaas.
Previous articleMadaxtooyada Soomaaliya oo loo Magacaabay Agaasime cusub
Next articleXFS oo $1 Milyan u qoondeysay wax ka qabashada Abaaraha.
In Sanaa, coalition forces destroyed nine Houthi weapons storage facilities.
axmed shiikh - December 24, 2021 0
Early on Friday, Arab coalition forces began carrying out air attacks to destroy Houthi armaments in a camp in Yemen's capital, Sanaa, according to...
Guddiga doorashada Heer Federaal oo booqday Goob loo asteeyay doorashada Golaha...
waxgaradka Habar-jeclo oo sheegay in ay Dacwad ka yihiin Wasiirka Warfaafinta...
WARBIXIN: 10-sano kaddib Dilka Qadaafi, Liibiya waa Sidee?
Nisa oo ka hor tagtay Qarax hab Casri ah loo qorsheeyey
Madaxweynaha Shiinaha oo wacad ku maray inuu dabayaaqada todobaadka midayn doonaan...
Farmaajo oo u duulay dalka Turkiga & ujeedka safarkiisa oo la...
axmed shiikh - December 16, 2021 0